नेपालविरुद्ध खेल्ने यूएई क्रिकेट टीमको घोषणा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपालविरुद्ध खेल्ने यूएई क्रिकेट टीमको घोषणा
काठमाडौं । नेपालविरुद्धको घरेलु मैदानमा हुने एकदिवसीय र टी–ट्वान्टी सिरिजका लागि युएईले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ ।
आगामी माघको दोस्रो साताबाट शुरु हुने सिरिजका लागि युएईले बिहिबार मोहमद नाभिदको कप्तानीमा टिमको घोषणा गरेको हो । सिरिजका लागि युएईले घोषणा गरेको टिमको उपकप्तान मोहमद उस्मान रहेका छन् ।
यस्तै अश्फाग अहमेद, चिराग सुरी, शाइमन अनवार, मोहमद बोटा, घुलाम शब्बर, इमरान हैदर, ताहिर मुघाल, अमीर हायत, जाहोर खान, क्वाडेर अहमेद, फहाद नवाज, अब्दुल शाकुर, सुल्तान अहमेद र सिपी रिजवान रहेका छन् ।
युएईसंगको खेलका नेपाली टोलीको भने घोषणा भएको छैन । नेपालले प्रारम्भिक टोलीको भने घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपालले माघ ११ देखि माघ २० सम्म युएईको भ्रमण गर्नेछ । नेपालले युएईसंग पहिला एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ । नेपालले माघ ११, १२ र १४ गते एकदिवसीय खेल खेल्नेछ । यस्तै माघ १७, १८ र २० मा टी–ट्वान्टी खेल खेल्नेछ ।